Izindaba - Ungabhekana Kanjani Ne-Intelligent Flow Peristaltic Pump Outlet Water Dripping Phenomenon
Ungabhekana Kanjani Ne-Intelligent Flow Peristaltic Pump Outlet Water Dripping Phenomenon
Lapho sisebenzisa i-flow peristaltic pump ukudlulisa uketshezi, sizothola ukuthi uketshezi olukuleli payipi aluyeki ukugeleza ngokushesha, luvame ukuconsa kancane. Akukhona ukuthi ipompo iyeka ukujikeleza futhi uketshezi luyeka ukugeleza phansi emcabangweni wethu, kepha uketshezi luyeka ukugeleza lapho uketshezi luconsa epayipini. Ukwenzeka kwalesi simo kubizwa ngokuthi yinto econsayo.
Izimbangela zokuvuza kwepompo ye-flow peristaltic?
Lesi yisimo esijwayelekile soketshezi. Isizathu ukuthi lapho ipompo idlulisa uketshezi, ipayipi lokuphuma kwepompo libheke phansi futhi linamandla adonsela phansi. Lapho ipompo iyeka ukujikeleza, uketshezi luyogeleza luye phansi kancane ngenxa yokuqina kwalo kanye namandla adonsela phansi, futhi umphumela uzobe uconsa emlonyeni wepayipi kuze kube yilapho uketshezi olukulo hose luconsa ngokuphelele. Ngalesi sikhathi, abanye abantu bangacabanga ukuthi njengoba uketshezi luconsa amandla adonsela phansi, yini okufanele yenziwe uma kwenzeka isiphon? Eqinisweni, ungakhathazeki. Ngikholwa ukuthi wonke umuntu ujwayelene nomgomo wokusebenza wepompo ye-peristaltic. Iphampu lithembela kuma-roller ukukhama ipayipi (itheku likhiqiza ingcindezi engemihle futhi isitolo sikhiqiza ingcindezi enhle), futhi umehluko wengcindezi usetshenziselwa ukudlulisa. Ngisho nalapho ukuzungezisa kumisiwe, i-hose iyacindezelwa ngokuqinile, ukuze okungenayo nendawo okungena kuyo inqanyulwe ukugwema lesi simo.
Isixazululo somkhuba oconsayo
Ngishilo izizathu zokuthi kungani uketshezi luconsa ku-hose. Esinye sazo ukuqiniswa kwephayiphu okunwebeka. Isizathu esenza ukuthi uketshezi luconse ukuthi ukuqiniswa kwepayipi kungaphansi kokudilika namandla adonsayo ketshezi uqobo. Uma sinweba lokhu kuxabana okunwebeka ukuze kukhule kunamandla ehlayo ketshezi, kwanele ukushintsha lesi simo.
1. Ububanzi be-hose outlet buyancipha, uketshezi olushubhu luba lincane, kepha ukuqina akuguquki, ngaleyo ndlela kuxazululwe inkinga.
2. Khulisa i-valve yengcindezi bese usetha i-valve yendlela eyodwa endaweni yokuphuma. Ivelufa izovulwa ingcindezi yepompo uqobo lapho isebenza, kuthi i-valve ivalwe ngokwemvelo lapho ime.
Kumele kuqashelwe ukuthi inkinga yesimo sokushaywa umoya. Lapho ipompo isetshenziselwa ukudlulisa uketshezi, lesi simiso somfutho sizodala ukuthi uketshezi olukulo hoseji wepompo ye-peristaltic lumunce emuva futhi lumunce emuva. Ngakho-ke, ububanzi bepayipi kufanele bube bukhulu kunobude bempompo obumunca emuva, uma kungenjalo kuzoba ngenxa yengxabano Akukho ukuvuza okwenziwayo.
Lokhu okungenhla kumayelana nokuvela nokuvinjelwa kwento econsayo yepompo ye-peristaltic pump. Uma ungakayiqondi noma ungayisebenzisi kahle, ungabhekisa kunjiniyela we-Lead Fluid ngemuva kokuthengisa.